▷ ULwesihlanu Olumnyama ku-Apple Watch: ukuthengiswa okuhle kakhulu | Izindaba ze-iPhone
U-Ignacio Sala | 27/11/2021 08:00 | Kubuyekezwe ku- 27/11/2021 10:20 | I-Apple Watch
NgoNovemba 26, uLwesihlanu Olumnyama lugujwa, olunye lwezinsuku ezinhle kakhulu zonyaka kusengaphambili christmas yezitolo. Uma uhlela ukuvuselela i-Apple Watch yakho endala noma uthenge i-Apple Watch yakho yokuqala, uLwesihlanu Olumnyama usuku olungcono kakhulu lokukwenza, njengoba njengoba kusondela uKhisimusi, amanani azokhuphuka futhi ngeke ukwazi ukuthola okunikezwayo.
Njengaseminyakeni edlule, iBlack Friday ngeke igcine usuku olulodwa kuphela, kodwa izogcina izonwetshwa phakathi nezinsuku ezedlule, futhi okunikezwayo kokuqala kuzoqala ngoNovemba 22 futhi kuphele ngoNovemba 29 ngeBlack Friday. Yiqiniso, usuku olubaluleke kakhulu luzoqhubeka lube yi-26, usuku lapho i-Black Friday igujwa ngokusemthethweni.
1 Yiziphi izinhlobo ze-Apple Watch ezithengiswayo ngo-Black Friday
1.1 I-Apple Watch Series 6
1.2 I-Apple Watch SE
1.3 I-Apple Watch Series 3
1.4 I-Apple Watch Series 7
2 Kungani kufanelekile ukuthenga i-Apple Watch ku-Black Friday?
3 I-Apple Watch ivamise ukunciphisa malini ngo-Black Friday?
4 Ingakanani i-Black Friday ku-Apple Watch
5 Ungawatholaphi amadili ku-Apple Watch phakathi no-Black Friday
5.3 Inkantolo YamaNgisi
Yiziphi izinhlobo ze-Apple Watch ezithengiswayo ngo-Black Friday
I-Apple Watch Series 6
Uchungechunge lwe-Apple 6 ...
I-Apple Watch Series 6 GPS, ...
TOP Black Friday umnikelo
I-Series 6 ingenye ye izinketho ezingcono kakhulu ezitholakalayo namuhla uma ufuna ukuthenga i-Apple Watch. Umehluko kuphela nge-Apple Watch Series 7 ukuthi le modeli entsha inosayizi wesikrini omkhulu, ngaphandle kokwengeza noma yikuphi ukusebenza okusha okwengeziwe.
Ngokwethulwa kweSeries 7, iSeries 6 isibe yisinqumo esihle kakhulu, hhayi ngoba yehlise intengo yayo, kodwa futhi ngoba ngeke siphuthelwe noma yimiphi imisebenzi yochungechunge 7.
I-Apple Watch SE
2021 Buka i-SE (GPS) -...
Uchungechunge lwe-Apple 3 ...
Ishaja ye-Apple ...
Ngonyaka emakethe, sithola i-Apple Watch SE, imodeli leyo ayisinikezi imisebenzi efanayo esingakuthola ku-Series 6, kodwa uma idizayini enesikrini esikhulu kune-Series 3.
Le modeli ngokuvamile ingatholakala kokunikezwayo, ngakho ngeke aphuthelwe phakathi nomgubho weBlack Friday.
I-Apple Watch Series 3
I-Apple Watch Series 3 38mm ...
I-Apple Watch Series 3 42mm ...
Naphezu kokuba imodeli endala ye-Apple Watch, yethulwe ngoSepthemba 2017, i-Apple iyaqhubeka nokuthengisa le divayisi eceleni kwe-Series 7 kanye ne-Apple Watch SE.
Ngokuhamba kwesikhathi emakethe, ngeke kube nzima ukuthola kulo modeli ngenani elingaphezu kokuthakaselayo, kokubili kunguqulo engu-38 no-42 mm.
Uchungechunge lwe-Apple 7 ...
I-Apple Watch Series 7 iyisizukulwane esisha se-Apple Watch, isizukulwane esisha ebesilokhu sisemakethe amasonto ambalwa. Akwenzeki ukuthi phakathi nokubungaza uLwesihlanu Olumnyama, sithola ukunikezwa okuthile kwale modeli entsha enganikezi noma yikuphi ukusebenza okwengeziwe ngesizukulwane esedlule.
Zama Ezizwakalayo izinsuku ezingu-30 mahhala
Izinyanga ezi-3 ze-Amazon Music mahhala
Zama i-Prime Video izinsuku ezingama-30 mahhala
Kungani kufanelekile ukuthenga i-Apple Watch ku-Black Friday?
Singaqinisekisa, ngaphandle kokwesaba ukuthi asilungile, ukuthi isikhathi esingcono kakhulu sokuthenga i-Apple Watch kungoLwesihlanu Olumnyama. Kokubili ngolwesihlanu Olumnyama nangoKhisimusi, izinkampani eziningi zifuna ukulahla isitoko anemikhiqizo emidala yokuvula indawo yamamodeli amasha asevele ekhona emakethe noma asezofika.
Ngaphezu kwalokho, lo mgubho wenzeka emasontweni ambalwa ngemva kokwethulwa kwe-Apple Watch entsha emsebenzini, ngakho-ke kulula kakhulu thola okunikezwayo okuthakazelisayo kwamamodeli esizukulwane esedlule. Uma ufuna ukuthenga i-Apple Watch kodwa awuzange uzitshele nje, usenezinsuku ezimbalwa zokuyenza.
I-Apple Watch ivamise ukunciphisa malini ngo-Black Friday?
Njengeminye imikhiqizo i-Apple eyethule emakethe emasontweni asanda kwedlula, njengohlu lwe-iPhone 13, i-iPad mini kanye ne-iPad yesizukulwane sesi-7, thola imodeli yakamuva ye-Apple Watch, i-Series XNUMX, enohlobo oluthile lwesaphulelo. kuzoba umsebenzi ongenakwenzeka.
Nokho, kuzoba lula kakhulu thola okunikezwayo okuthakazelisayo ku-Apple Watch Series 6, imodeli okuthi, emavikini andulela uLwesihlanu Olumnyama, siyithole ngezaphulelo ezifika ku-15%, kokubili kuzinguqulo ezingu-40mm kanye ne-44mm.
Yize i-Apple Watch SE isathengiswa ngokusemthethweni nge-Apple, cishe selokhu yethulwa ibilokhu itholakala ku-a intengo ephansi kakhulu evela ku-Apple esemthethweni ku-Amazon, ngesaphulelo esiphakathi kuka-7 no-12%.
Mayelana ne-Apple Watch Series 3, imodeli eqede iminyaka emi-4 emakethe, izoba mkulula kakhulu ukuthola okunikezwayo ngezansi kwe-190 euros, enguqulweni engu-42mm, ebiza kakhulu kunazo zonke.
Ingakanani i-Black Friday ku-Apple Watch
Njengoba ngishilo ekuqaleni kwalesi sihloko, iBlack Friday izoba ngo-November 26. Kodwa-ke, futhi njengenjwayelo, kusukela ngoMsombuluko, Novemba 22 kuya kuNovemba 29, sizokwazi ukuthola okunikezwayo kwazo zonke izinhlobo zemikhiqizo, hhayi nje i-Apple Watch.
Nokho, izinkampani eziningi okunikezwayo okuhle kakhulu kulondolozelwe umhlaka-26. Uma ufuna i-Apple Watch noma yimuphi omunye umshini ukusizakala Black Friday, amathuba ukuthi uzoyithola ngesikhathi Black Friday uqobo.
Ungawatholaphi amadili ku-Apple Watch phakathi no-Black Friday
Apple akakaze abe umngane ngezaphulelo yanoma yiluphi uhlobo, ngakho-ke ungalindeli ukuthenga i-Apple Watch nge-Apple Store online noma ezitolo ezibonakalayo inkampani ezinze eCupertino enazo kulo lonke elaseSpain.
Kuzo zombili iwaranti kanye nenkonzo yamakhasimende, i-Amazon ingenye ye amapulatifomu amahle kakhulu lapho uthenga noma yimuphi umkhiqizo we-Apple, kungaba i-Apple Watch, i-iPhone, i-iPad ...
Yi-Apple uqobo engemuva kwayo yonke imikhiqizo ye-Apple, ekufanelekela ukuphindiselwa kabusha, esingayithola ku-Amazon, ngakho-ke kuzoba okufanayo uyithenge ngqo kwa-Apple.
Ezikhungweni zeMediamarkt, kanye nangewebhusayithi yayo, sizothola imikhiqizo ye-apula epholile, okuhlanganisa i-Apple Watch kanye ne-iPhone ikakhulukazi.
U-El Corte Inglés ngeke aphuthelwe ohlwini lwezikhungo lapho sizokwazi khona thenga i-Apple Watch kanye nanoma yimuphi omunye umkhiqizo we-Apple ngamanani athakazelisayo.
Uma sifuna ukuzama ngaphambili hlola, i-fiddle, kanye ne-fiddle nge-Apple Watch yakho Ngaphambi kokuyithenga, singama nge-K-Tuin, isitolo esisebenza ngemikhiqizo yakwa-Apple.
Uma okufunayo yonga imali enhle ngokuthenga i-Apple Watch, kufanele unikeze ithuba abafana kwa-Magnificos, iwebhusayithi ekhethekile ngemikhiqizo ye-Apple nezinsiza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » black Friday apple watch
Black Friday ku-Mac